Kenya oo eedeysay Eritaria - BBC News Somali
Kenya oo eedeysay Eritaria
Lahaanshaha sawirka internet
Image caption Askarta Kenya ayaa galay Soomaaliya si ay ula dagaalamaan Al Shabaab oo qatar ku haysa Kenya
Dawladda Kenya waxay ka dalbatay xukuumada Eritrea in ay jawaab ka bixiso eedeynta la xiriirta in Eritrea hub uga dajisay Magaalada Baydhabo ee Soomaliya kooxda Al Shabaab.
Kenya ayaa sheegtay in cabasho arrintaas ku saabsan u gudbisay urur goboleedka IGAD.
Wasiirka arrimaha dibedda ee Kenya Moses Wetangula ayaa xafiiskiisa Nairobi ugu yeeray safiirka Eritrea u fadhiya Kenya. Eritrea ayaa horay u beeneysay in ay wax hub ah u geysay Al shabab.
Todobaadka soo socda waxaa lagu wadaa in wafdi uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha dibedda ee Eritrea ay gaaraan Nairobi, si ay dowladda kenya ugu sharaxaan mowqifkooda ku aadan hubkaas la sheegay in loo geeyey kooxda Al Shabaab.
Militeriga Kenya ayaa todobaadkan sheegay in ay ka war hayaan diyaarado ka degay magaalada Baydhabo oo sida shixnado hub ah oo u socda kooxda Al Shabaab
Militeriga Kenya waxaa uu sidoo kale sheegay in kooxda Al Shabaab adeegsanayso dameero inay ku safriso hubkaas. Waxaa uuna intaas ku daray militerigu in uu is hortaagi doono in hubkaas gacanta u galo kooxda shabaab.
Kenya waxay ciidankeeda gelisay Soomaliya bartamihii bishii hore, waxayna sheegtay inay la dagaalamayso kooxda Al Shabaab oo ay ku eedeynayso in ay ka dambeyeen afduubyo ka dhacay Kenya oo dad ajnabi ah laga afduubtay kenya loona gudbiyey Soomaliya.
Warbixin uu soo saaray guddiga kormeerka ee Qaramada Midoobay horaantii sannadkan, ayaa waxaa uu ku eedeeyey Eritrea in ay taageerto kooxda Al Shabaab isla markaasna ay ku xad gudubtay cunaqabateyta hubka ee saaran Soomalia.